17 शीर्ष मान्यता प्राप्त अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रमहरू र पाठ्यक्रमहरू 2022
एक कौशल अनलाइन सिक्नुहोस्
17 शीर्ष मान्यता प्राप्त अनलाइन प्यारालीगल कार्यक्रमहरू र पाठ्यक्रमहरू
13 सक्छ, 2022 इजे थड्डियस
के तपाईंलाई थाहा छ त्यहाँ अनलाइन paralegal कार्यक्रमहरू र पाठ्यक्रमहरू छन् जुन तपाईंले कानुनी पेशाको बाटोमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ? यद्यपि त्यहाँ धेरै अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रमहरू छन् जुन यस ब्लग पोस्टमा मान्यता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई मात्र क्युरेट गरिएको छ ताकि तपाईंले मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र कमाउन सक्नुहुन्छ।
इन्टरनेट र डिजिटल उपकरणहरूको लागि धन्यवाद, तपाईंले मेडिकल र निर्माण पाठ्यक्रमहरूदेखि कम्प्युटर र डाटा एनालिटिक्स सीपहरू जुन मान्यता प्राप्त योग्यताहरू प्रस्ताव गर्दछ जुन अनलाइन सिक्न सक्नुहुन्छ। यी योग्यताहरूले प्रमाणपत्र, डिप्लोमा र डिग्रीहरू समावेश गर्दछ। र किनभने तिनीहरू विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालयहरू र कलेजहरूद्वारा प्रस्तावित छन् यसले विश्वभरका HRs द्वारा स्वीकार्य योग्यताहरू बनाउँछ।
अब, तपाईं आफ्नो घरको आराममा बसेर एक लिन सक्नुहुन्छ नि: शुल्क अनलाइन कानून पाठ्यक्रम शीर्ष संस्थाहरू मध्ये एकबाट र पूरा भएपछि प्रमाणपत्र कमाउनुहोस्। तपाईं कानून बाहेक अन्य क्षेत्रमा अनलाइन कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्, बैंक तोडेर, त्यहाँ सयौं छन्। नि: शुल्क अनलाइन पाठ्यक्रमहरू केवल तपाइँ अन्वेषण गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्दै।
यस ब्लगमा क्युरेट गरिएका अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रमहरू र पाठ्यक्रमहरूले इच्छुक वकिलहरूलाई वा कानुनी पेशामा क्यारियर सुरु गर्न चाहनेहरूलाई मद्दत गर्नेछ। यदि तपाइँ क्यारियर परिवर्तन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यहाँ छलफल गरिएको अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रम पनि तपाइँको लागि ठूलो मद्दत हुन सक्छ। मान्यता प्राप्त कार्यक्रमहरू मध्ये एकमा डुब्नुहोस् र कुनै समयमै प्यारालीगल बन्नुहोस् र कानुनी मार्गमा आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुहोस्।
कानुनी ठाउँमा आफूलाई राम्रोसँग तयार गर्न, तपाईंले जाँच गर्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ नि: शुल्क अनलाइन कानून पुस्तकालय र हेर्नुहोस् यो तपाइँलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंले पुस्तकालयमा पाठ्यपुस्तकहरू, जर्नलहरू, पाठ्यक्रमहरू, आदि फेला पार्न सक्षम हुनुपर्दछ जसले तपाईंको ज्ञानलाई फराकिलो बनाउँदछ र तपाईंको विशेषज्ञतालाई फराकिलो बनाउँदछ।
र जब तपाईंले अनलाइन प्यारालिगल प्रोग्रामहरू मध्ये एक पूरा गर्नुभयो र कानुनी पेशामा थप स्थापित हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले कानुनी विद्यालयमा जान आवश्यक छ। स्पेनसँग केही छन् सबै भन्दा राम्रो कानून स्कूलहरु र यदि तपाईंलाई फराकिलो विकल्प चाहिन्छ भने, तपाईं जाँच गर्न सक्नुहुन्छ युरोप मा उत्तम कानून स्कूल, साथै, द कानून को लागी संसार मा सबै भन्दा राम्रो विश्वविद्यालयहरु। अन्तर्राष्ट्रिय कानून पनि एक चाखलाग्दो प्रकारको कानूनी मार्ग हो र यदि तपाईंको रुचि यही हो भने, सोर्सिङ सुरु गर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको लागि उत्तम विश्वविद्यालयहरू र आफ्नो आवेदन पठाउन सुरु गर्नुहोस्।
एक अनलाइन Paralegal कार्यक्रम के हो?
त्यहाँ नि: शुल्क अनलाइन Paralegal कार्यक्रमहरू छन्?
अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रमहरूमा सामेल हुनका लागि आवश्यकताहरू
अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रमहरूको फाइदाहरू
मान्यता प्राप्त अनलाइन Paralegal कार्यक्रमहरू
1. द सिटी युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कको अनलाइन प्यारालिगल कोर्स
2. US क्यारियर संस्थानको अनलाइन प्यारालीगल कार्यक्रम
3. सिनसिनाटी अनलाइन विश्वविद्यालयमा कानून र पारालीगल अध्ययनमा प्रमाणपत्र
4. BARBRI Paralegal सर्टिफिकेट कोर्स अनलाइन द्वारा CLS
5. पश्चिमी नेभाडा कलेजको प्रमाणित Paralegal अनलाइन
6. फ्लोरिडा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको Paralegal अनलाइन
7. SDSU ग्लोबल क्याम्पसमा प्रमाणित पारालीगल
8. रासमुसेन विश्वविद्यालयको अनलाइन प्यारालीगल कार्यक्रमहरू
9. राइस विश्वविद्यालयको प्यारालीगल स्नातक प्रमाणपत्र
10. स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयको प्यारालीगल प्रमाणपत्र कार्यक्रम
अनलाइन प्यारालिगल पाठ्यक्रमहरूको सूची
1. कानूनी कार्यालय प्रशासन
2. प्यारालीगल क्र्यास कोर्स
3. कानूनी अध्ययन - कानून र न्यायिक प्रणाली
4. कानून प्रवर्तन मा नैतिकता
5. कानूनी अध्ययन - विरोधी परीक्षण प्रणाली
6. कानुनी अध्ययन र व्यवसायमा उन्नत डिप्लोमा
7. कानून मा अनुबंध को परिचय
प्यारालीगल कार्यक्रमहरूका लागि शीर्ष विद्यालयहरू
अनलाइन प्यारालिगल प्रोग्रामहरू - FAQs
के म अनलाइन paralegal बन्न सक्छु?
कुन प्रकारको paralegal सबैभन्दा पैसा कमाउँछ?
प्यारालीगल हुन कति समय लाग्छ?
एक paralegal को तलब के हो?
कुन प्रकारको प्यारालीगल सबैभन्दा बढी माग छ?
paralegal कहाँ काम गर्न सक्छ?
एक अनलाइन paralegal कार्यक्रम एक अनलाइन कार्यक्रम हो जसले तपाईंलाई सफलताको लागि आवश्यक कानूनको आधारभूत समझ प्रदान गर्दछ। तपाईले कानूनी अनुसन्धान, व्यावसायिक नैतिकता, औपचारिक र कानूनी लेखन, कानूनी प्रणाली, मुकदमेबाजी, र घर जग्गा कानून सिक्नुहुनेछ।
जब तपाइँ एक अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रम पूरा गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँसँग प्यारालिगलको सीप सेट छ र कानूनी फर्ममा काम गर्नुहुन्छ भनेर देखाउनको लागि प्रमाणपत्र कमाउनुहुनेछ। एक प्यारालीगलको रूपमा, तपाईंलाई कानूनी काम गर्न र फर्ममा अन्य वकिलहरूलाई मद्दत गर्न तालिम दिइएको छ तर तपाईं योग्य वा पेशेवर वकिल हुनुहुन्न। यसैले मैले पहिले उल्लेख गरेको छु कि अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रमहरू लिनुले तपाईंलाई वकिल बन्ने बाटोमा सेट गर्दछ।
एक प्यारालीगलको रूपमा, तपाइँको जिम्मेवारीहरूमा केस योजना, विकास, र व्यवस्थापन, तथ्यहरू सङ्कलन र जानकारी पुन: प्राप्ति, ग्राहक र साक्षीहरूसँग अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने, कानूनी कागजातहरूको मस्यौदा र विश्लेषण र सङ्कलन, अनुसन्धान सञ्चालन, कानुनी अनुसन्धान सञ्चालन, कानुनी कागजातहरूको मस्यौदा समावेश हुनेछ। , पत्राचार, र निवेदन, र बयान, सोधपुछ, र गवाही संक्षेप।
हो, त्यहाँ प्रमाणपत्रहरू सहित नि: शुल्क अनलाइन प्यारालिगल पाठ्यक्रमहरू छन् जुन तपाईंले Alison र Udemy मा फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
सर्वप्रथम, यो एक अनलाइन कार्यक्रम हो त्यसैले तपाईलाई उपयुक्त चाहिन्छ डिजिटल शिक्षा उपकरण जस्तै PC, iPad, ट्याब्लेट, वा स्मार्टफोन र Wi-Fi जडानमा पहुँच। साथै, अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रमहरू प्रदान गर्ने स्कूलले तपाईंलाई कार्यक्रममा प्रवेशको लागि योग्य र विचार गर्नका लागि केही आवश्यकताहरू र मापदण्डहरू पूरा गर्न आवश्यक पर्दछ।
यी आवश्यकताहरू हुन्:
हाई स्कूल डिप्लोमा वा एसोसिएट डिग्री पूरा गरेको र कमाएको हुनुपर्छ
हाई स्कूल सहित उपस्थित अघिल्लो संस्थाहरु बाट ट्रान्सक्रिप्ट
न्यूनतम GPA आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस्, सामान्यतया 2.5 वा उच्च
कम्प्युटर विज्ञान र माइक्रोसफ्ट वर्डमा प्रवीणता
अनलाइन paralegal कार्यक्रमहरूका फाइदाहरू हुन्:
तपाईले आफ्नो घरको आरामबाट वा तपाईलाई सिक्नको लागि पर्याप्त सुविधाजनक ठाउँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ
तपाईंले कम्युट छोडेर तोकिएको सिकाइ साइटमा जानुभएपछि त्यहाँ तनाव कम हुन्छ
तपाईं आफ्नो गतिमा सिक्न सक्नुहुन्छ
अनलाइन paralegal कार्यक्रमहरू लचिलो छन्, त्यो हो, कक्षाहरू तपाईंको व्यस्त तालिकामा फिट गर्न डिजाइन गरिएको हो
अनलाइन सिक्ने र कार्यक्रम पूरा गर्न छिटो छ जसले तपाईंलाई छिटो काम पाउन मद्दत गर्नेछ
तपाईं आफैले सिक्न पाउँदा कम अवरोधहरू
रोजगार नियुक्ति सहायता
कक्षाको आकार सानो छ जसले शिक्षक र विद्यार्थी बीचको ध्यान र अन्तरक्रिया बढाउँछ
यहाँ, तपाईंले विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, कलेजहरू, र सामुदायिक कलेजहरूबाट छनौट गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएका धेरै अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रमहरू फेला पार्नुहुनेछ। पहिले, मैले अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रम आवश्यकताहरूको सूची बनाएको छु जुन केवल एक सामान्य सूची हो किनभने यी आवश्यकताहरू स्कूलदेखि स्कूल र कार्यक्रम अनुसार फरक हुन्छन्।
विशिष्ट र पूर्ण आवश्यकताहरू जान्नको लागि तपाईंले आफ्नो मनपर्ने विद्यालयको प्रवेश कार्यालयमा सम्पर्क गर्न र पूर्ण विवरणहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ। हामी अन्तमा जानु अघि, तपाइँसँग कम्प्युटर साक्षरता हुनुपर्दछ, अन्यथा तपाइँ खोज्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन कम्प्युटर कोर्स लिनु।
कुनै पनि थप विज्ञापन बिना, मान्यता प्राप्त अनलाइन paralegal कार्यक्रमहरू हुन्:
न्युयोर्कको सिटी युनिभर्सिटीले तपाईंलाई प्यारालिगलको कर्तव्य कुशलतापूर्वक पूरा गर्न र प्रमाणित पारालीगल (CP) परीक्षाको लागि तयार गर्नको लागि कौशलताको साथ सुसज्जित गर्न 100% अनलाइन प्यारालिगल कोर्स प्रस्ताव गरिरहेको छ। पाठ्यक्रम लिनको लागि कुनै आवश्यक शर्तहरू छैनन् र तपाईंले यो पढिरहनु भएको बेला पनि तपाईंले कुनै पनि समय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रमका लागि प्रशिक्षक केसी थम्पसन हुन्, टेक्सासमा इजाजतपत्र प्राप्त वकिल।
अब भर्ना गर्नुहोस्
यूएस क्यारियर इन्स्टिच्युट एक मान्यता प्राप्त संस्था हो जसले प्यारालीगल सहित अनलाइन कार्यक्रमहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। यो एक उत्तम अनलाइन paralegal कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ र यसलाई प्रमाणित गर्न संख्या र मूल्याङ्कनहरू छन्। कक्षा 100% अनलाइन छ र तपाईंले आफ्नै समयमा सिक्न पाउनुहुन्छ, विद्यार्थीहरूको लागि कक्षा तालिका सेट गर्नुहोस् र उनीहरूले 24/7 सकेसम्म आफ्नै गतिमा सिक्न सक्छन्।
अनलाइन प्यारालीगल कार्यक्रमको बखत, तपाईंले Tort कानून, अनुबंध कानून, संघीय र राज्य कानूनहरूको सञ्चालन, वकिलहरूसँग काम गर्ने, आदि सिक्नुहुनेछ, र वास्तविक-विश्व सीपहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई रोजगारीको लागि आवश्यक सीपहरू प्राप्त गर्न र तपाईंलाई तयार पार्न मद्दत गर्दछ। उद्योग प्रमाणीकरण को लागी। कार्यक्रम लागत प्रति महिना $ 69 छ र सिक्ने सामग्री, क्यारियर समर्थन, र प्रशिक्षकहरूको पहुँच कभर गर्दछ। त्यहाँ 100% पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी पनि छ।
सिनसिनाटी अनलाइन विश्वविद्यालयले शीर्ष अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रमहरू मध्ये एक प्रदान गर्दछ जुन प्रमाणीकरणमा जान्छ। कार्यक्रम पूर्णतया अनलाइन छ र क्यारियर परिवर्तन खोज्ने वा प्यारालीगल बन्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ। यसको अनौठो पाठ्यक्रमको साथ, विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको व्यावसायिक लक्ष्यहरूमा पुग्न मद्दत गर्नको लागि कौशलताले सुसज्जित छन्।
सिनसिनाटी अनलाइनमा अनलाइन प्यारालिगल प्रमाणीकरण कार्यक्रमको फाइदाहरू भनेको तपाईंले एक वर्षमा स्नातक गर्न सक्नुहुन्छ, इजाजतपत्र प्राप्त वकिलहरूबाट सिक्न सक्नुहुन्छ र जागिरको स्थान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ एक अंश-समय वा पूर्ण-समय ढाँचामा कार्यक्रम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
BARBRI द्वारा CLS मा तपाईंले सबैभन्दा राम्रो अनलाइन प्यारालिगल प्रोग्रामहरू मध्ये एकमा नामांकन गर्न सक्नुहुन्छ र केवल 14 हप्तामा प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ - Paralegal I र Paralegal II - प्रत्येक7हप्ता। स्नातक गर्न, दुबै सत्रहरू लगातार लिनु पर्छ। जब paralegal I ले paralegals को लागि जग सेट गर्दछ, paralegal II ले विद्यार्थीहरूलाई गहिराइमा लैजान्छ र तिनीहरूलाई पेशाको गहन ज्ञान र सीपहरू प्रदान गर्दछ।
कार्यक्रम पूर्ण रूपमा अनलाइन पनि छ र विद्यार्थीहरूले साप्ताहिक रूपमा 8-12 घण्टा पढ्न र लेखन कार्यहरू पूरा गर्न खर्च गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
पश्चिमी नेभाडा कलेजसँग निरन्तर शिक्षा इकाई छ जसले अनलाइन र दूर शिक्षा पाठ्यक्रमहरू र कार्यक्रमहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ जसले प्रमाणीकरणको लागि नेतृत्व गर्दछ। यी मध्ये एक अनलाइन प्रमाणीकरण कार्यक्रम एक paralegal हो जुन तपाईंलाई एक प्रमाणित paralegal बन्न सजिलो तरिका र कुनै समय मा मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको छ। कार्यक्रम NALA द्वारा समान रूपमा मान्यता प्राप्त छ।
यो एक उत्तम paralegal कार्यक्रमहरू अनलाइन हो जसले तपाइँलाई तपाइँको प्रमाणित पारालीगल (CP) क्रेडेन्सियल कमाउन र तपाइँलाई एक प्रवेश-स्तर क्यारियरको लागि तयार पार्न तयार गर्दछ। तपाईं कुनै पनि समयमा भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको लागि पर्याप्त छ र तपाईंको आफ्नै गतिमा सिक्न सुरु गर्नुहोस्।
फ्लोरिडा इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीसँग कानुनी अध्ययन संस्थान छ जसले अनलाइन सर्वश्रेष्ठ-मान्यता प्राप्त प्यारालीगल कार्यक्रमहरू मध्ये एक प्रदान गर्दछ। अनलाइन कार्यक्रममा विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट विद्यार्थीहरू सामेल हुन सक्छन्, तपाईंले भर्ना आवश्यकताहरू पूरा गरेसम्म तपाईंलाई कार्यक्रममा स्वीकार गरिनेछ।
अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रम पूरा हुन एक वर्ष लाग्छ र यसलाई तीन सेमेस्टरमा विभाजन गरिएको छ, र 615 विषयहरूमा कुल 12 घण्टा। कुल कार्यक्रम लागत $ 7,120 हो।
SDSU ग्लोबल क्याम्पसले अनलाइन प्रमाणीकरण कार्यक्रमहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ र paralegal ती मध्ये एक हो। SDSU ग्लोबल क्याम्पसमा अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रम पूर्ण रूपमा अनलाइन र मान्यता प्राप्त छ, तपाईं कुनै पनि समय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, र आफ्नै गतिमा सिक्न सक्नुहुन्छ। 12 महिनामा, तपाईंले कार्यक्रम पूरा गर्नुहुनेछ र पूर्ण रूपमा विकसित पारालीगल बन्नुहुनेछ।
तालिमको बखत, तपाइँ कसरी कार्यहरू प्रदर्शन गर्ने र तपाइँको दैनिक गतिविधिहरू कुशलतापूर्वक गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाइँ तपाइँको प्रमाणपत्र कमाउन र कुनै समय मा काम गर्न को लागी प्रमाणित Paralegal (CP) प्रमाणीकरण परीक्षा लिन को लागी तयार हुनुहुनेछ। यो कोर्स लिनको लागि कुनै आवश्यक शर्तहरू छैनन्, तथापि, तपाईंलाई भर्ना गर्नको लागि हाई स्कूल डिप्लोमा वा GED बराबर आवश्यक पर्दछ। कुल कार्यक्रम लागत $ 2,495 हो।
रासमुसेन विश्वविद्यालयले तपाइँलाई दुई paralegal अध्ययन विकल्पहरू, एक अनलाइन paralegal प्रमाणपत्र, र एक अनलाइन paralegal सहयोगी डिग्री प्रदान गर्दछ। तपाईंले खोज्नुभएका विकल्पहरू मध्ये जुनसुकै विकल्पले तपाईंलाई कानुनी प्रणाली र कानुनी नैतिकताको महत्त्वबारे सिकाउनेछ, र तपाईंले न्यायाधीशहरू, वकीलहरू, र paralegals अभ्यास गर्ने कानूनी क्षेत्रमा अनुभवी र दक्ष प्रशिक्षकहरूबाट सिक्नुहुनेछ।
अनलाइन paralegal सहयोगी डिग्री अनलाइन पूरा गर्न 18 महिना लाग्छ जबकि अनलाइन paralegal प्रमाणपत्र पूरा गर्न 8 महिना लाग्छ तर तपाईंले प्रमाणपत्र कार्यक्रम लिनको लागि एक सहयोगी वा स्नातक डिग्री कमाएको हुनुपर्छ।
राइस युनिभर्सिटीले कानुनी क्षेत्रमा करियर सुरु गर्ने वा आफ्नो क्यारियरलाई अगाडि बढाउन खोज्ने व्यक्तिहरूलाई प्यारालिगल स्नातक प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछ। तपाइँ जुन कोटि मा पर्नु हुन्छ, यो कार्यक्रमले तपाइँलाई अर्को चरण लिन आवश्यक प्रमाणीकरण प्रदान गर्दछ। कार्यक्रम दुई ढाँचाहरूमा छ: एक साँझको कक्षा कोठा र अनलाइन र यसलाई पूरा गर्न5महिना लाग्छ।
कार्यक्रम दशकौंको अनुभव र अझै अभ्यास गर्दै वकीलहरू द्वारा सिकाइन्छ। कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि, स्नातकहरूले राइस युनिभर्सिटी प्यारालिगल स्नातक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्।
Stony Brook University's School of Professional Development ले व्यक्तिगत र अनलाइन ढाँचा दुवैमा उपलब्ध paralegal प्रमाणपत्र कार्यक्रम प्रदान गर्दछ। तपाईं कुनै पनि अध्ययन ढाँचामा सामेल हुन सक्नुहुन्छ र आफ्नो कर्तव्यहरू कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने पेशेवर प्यारालिगलको रूपमा काम गर्न आवश्यक सीपहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा सामेल हुनको लागि कुनै पूर्व शर्तहरू आवश्यक पर्दैन तर विद्यार्थीहरूले प्रत्येक सत्रको लागि गृहकार्य पूरा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
कार्यक्रम पूरा गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पूर्णताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ र 8.4 निरन्तर शिक्षा एकाइहरू प्राप्त गरिनेछ।
यी शीर्ष मान्यता प्राप्त अनलाइन paralegal कार्यक्रमहरू हुन् जुन तपाईं संसारको कुनै पनि भागबाट सामेल हुन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाइँ एक व्यक्तिगत कक्षा रुचाउनुहुन्छ भने, केहि कार्यक्रमहरू पनि क्याम्पसमा प्रस्तावित छन्। अनलाइन paralegal कार्यक्रमहरू मध्ये एकमा सामेल हुनुहोस् र कानुनी पेशामा क्यारियर सुरु गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ पहिले नै एक paralegal हुनुहुन्छ र तपाइँको सीपहरू अपग्रेड गर्न चाहानुहुन्छ जुन कार्यक्रममा प्रतिबद्ध नगरीकन पूरा हुन महिनौं लाग्छ, तपाइँ अनलाइन paralegal पाठ्यक्रमहरू लिने विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन paralegal पाठ्यक्रमहरू पूरा हुन केही दिन लाग्छ र तपाईंलाई paralegal को रूपमा सुधार गर्न आवश्यक सीपहरू प्रदान गर्न सक्छ।
यहाँका अनलाइन प्यारालिगल पाठ्यक्रमहरू पनि शीर्ष विश्वविद्यालयहरू, कानुनी संस्थाहरू, र कानुनी विशेषज्ञहरूद्वारा प्रस्तावित छन्। जब तपाइँ कुनै पनि पाठ्यक्रमहरू पूरा गर्नुहुन्छ, तपाइँले तपाइँको पोर्टफोलियोमा संलग्न गर्न सक्नुहुने निःशुल्क प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नुहुनेछ।
अनलाइन paralegal पाठ्यक्रमहरू हुन्:
यो Alison मा Workforce Academy Partnership द्वारा प्रस्तावित अनलाइन paralegal पाठ्यक्रमहरू मध्ये एक हो। नि:शुल्क पाठ्यक्रम पूरा हुन ५-६ घण्टा लाग्छ र कानुनी पेशाका विभिन्न प्रक्रिया र कार्यहरू कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछ। तपाईंले यस पाठ्यक्रमबाट प्राप्त गर्नुभएको सीपहरू तपाईंको प्यारालिगल पेशामा लागू गर्न सकिन्छ र तपाईंको विशेषज्ञतालाई बढावा दिन सकिन्छ।
यो Udemy द्वारा प्रस्तावित अनलाइन प्यारालिगल पाठ्यक्रमहरू मध्ये एक हो र तपाइँलाई आफैंमा paralegal कसरी बन्ने भनेर सिकाउँछ। यदि तपाइँ कुनै सीप वा पेशाको ज्ञान बिना paralegal को रूपमा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र लामो समय सम्म केहि गर्न चाहनुहुन्न भने, यो पाठ्यक्रम तपाइँको लागि हो। तपाइँ एक paralegal र अन्य लाभकारी कौशल बन्न आवश्यक आधारभूत कौशल प्राप्त गर्नुहुनेछ। जे होस्, तपाइँको विशेषज्ञता साँच्चै आधारभूत हुनेछ र तपाइँले मात्र धेरैमा प्रवेश-स्तर स्थितिहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यो एलिसनमा प्रस्ताव गरिएको नि:शुल्क अनलाइन प्यारालिगल कोर्स हो जसले तपाईंलाई विभिन्न प्रकारका कानून, तिनीहरूको महत्त्व र न्यायिक प्रणाली सिकाउनेछ। यो paralegals को लागि प्राप्त गर्न को लागी एक अतिरिक्त ज्ञान हो र उनीहरुलाई दैनिक काम गर्ने वकिल र न्यायाधीशहरु संग अधिक सम्बन्ध मा मद्दत गर्नेछ।
यो BCcampus OpenEd द्वारा प्रस्तावित अनलाइन प्यारालिगल पाठ्यक्रमहरू मध्ये एक हो। यो एक नि:शुल्क पाठ्यक्रम हो जसले तपाईंलाई कानून प्रवर्तनको नैतिक र नैतिक मुद्दाहरूको ज्ञानको साथ तालिम दिन्छ र सुसज्जित गर्दछ। यो कोर्स लिने प्यारालिगलहरूले अपराध अनुसन्धान र साक्षीहरूको अन्तर्वार्ता कसरी गर्ने भन्ने बारे आफ्नो ज्ञान बढाउनेछन्।
यो अनलाइन paralegal पाठ्यक्रमले तपाईंलाई विरोधी परीक्षण प्रणालीको बारेमा सिकाउनेछ, यसले तपाईंलाई कानुनी प्रणालीको राम्रो बुझाइ दिन्छ र सिविल र फौजदारी कानूनको तपाईंको ज्ञान बढाउँछ। तपाईले अदालत र परीक्षण प्रणालीको बारेमा पनि सिक्नुहुनेछ।
यो Advance Learning द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध गराइने अनलाइन प्यारालिगल पाठ्यक्रमहरू मध्ये एक हो र यसले तपाईंलाई कम्पनीको संरचना, विभिन्न संगठनका कार्यहरू, र व्यापारिक वातावरणहरू बारे सिकाउँछ। यो कोर्स लिनुले तपाइँलाई तपाइँको अफिसको राम्रो व्यवस्थापन गर्न र तपाइँको दक्षता बढाउनको लागि कौशलता संग सुसज्जित हुनेछ।
के तपाईलाई कानुनी रूपमा एक सम्झौता बाध्य पार्ने प्रक्रियाहरू थाहा छ? वा तपाईलाई थाहा छ कि कसरी क्षतिको साथ एक उल्लंघन समाधान गर्ने? यदि तपाईलाई यी मध्ये कुनै पनि थाहा छैन र तपाई कानुनी पेशामा हुनुहुन्छ भने, तपाईलाई फराकिलो ज्ञानको साथ सुसज्जित गर्न यो कोर्स लिनुहोस्। तपाईले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्वहरूको बारेमा जान्नुहुनेछ जसले सम्झौता र अन्य धेरै कुराहरू बनाउँदछ।
यी सबै भन्दा राम्रो अनलाइन paralegal कार्यक्रमहरू हुन् जुन तपाईंले लिन सक्नुहुन्छ र केही घण्टादेखि केही दिनहरूमा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै थोरै प्रतिबद्धता छ र एक कार्यक्रमको लागि 12 महिनासम्म अध्ययन गर्न नसक्नेहरूका लागि उपयुक्त छ। जे होस्, यी पाठ्यक्रमहरू पहिले नै paralegals वा कानुनी पेशामा संलग्न र उनीहरूको विकासलाई समर्थन गर्न केवल पाठ्यक्रमहरू खोजिरहेकाहरू द्वारा लिइन्छ।
केही स्कूलहरू, त्यो हो, विश्वविद्यालय र कलेजहरू, विश्वव्यापी रूपमा प्यारालीगल कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्नमा उत्कृष्ट भएकोमा मान्यता प्राप्त छन्। यी विद्यालयहरू हुन्:
मोन्टगोमेरी मा औबर्न विश्वविद्यालय
क्यालिफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय, लस एन्जलस
डेस मोइन्स एरिया सामुदायिक कलेज
ग्रैंड घाटी राज्य विश्वविद्यालय
इलिनोइस राज्य विश्वविद्यालय
यी विश्वविद्यालयका paralegal कार्यक्रमहरू आफैंमा अन्वेषण गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि तिनीहरू तपाईंको लागि उपयुक्त छन्।
हो, तपाइँ मान्यता प्राप्त अनलाइन प्यारालिगल कार्यक्रमहरू मध्ये एकमा नामांकन गरेर र प्रमाणीकरण परीक्षाको लागि तयारी गरेर अनलाइन प्यारालीगल बन्न सक्नुहुन्छ।
सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने प्यारालीगल एक Paralegal प्रबन्धक हो जसले प्रति वर्ष $ 104,775 कमाउँछ
तपाइँ कुन डिग्री पछ्याउन चाहानुहुन्छ र तपाइँ तपाइँको यात्रामा हुनुहुन्छ भन्ने आधारमा, यो एक प्यारालिगल बन्न2र7वर्ष को बीचमा कहीं पनि लाग्न सक्छ।
एक paralegal को औसत वार्षिक तलब $ 56,230 हो
दिवालियापन पारालीगल सबैभन्दा बढि माग हो र त्यसपछि पारिवारिक कानून प्यारालीगल।
एक प्यारालीगलले कानुनी फर्महरू, सरकार, कर्पोरेट, घर जग्गा र शीर्षक बीमा, सम्पत्ति योजना र प्रोबेट, गैर सरकारी संस्थाहरू, अध्यागमन सेवाहरू, र चिकित्सा वा स्वास्थ्य सेवाहरूमा काम गर्न सक्छ।
11 सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क अनलाइन कार्यालय प्रशासन पाठ्यक्रमहरू
11 नि: शुल्क अनलाइन सेक्रेटेरियल पाठ्यक्रमहरू प्रमाणपत्रहरू सहित
शीर्ष7नि: शुल्क अनलाइन वकील परामर्श वेबसाइटहरू
कानूनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयहरू
शीर्ष9नि: शुल्क अनलाइन मानव संसाधन व्यवस्थापन पाठ्यक्रमहरू
5 सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क अनलाइन केस व्यवस्थापन पाठ्यक्रमहरू
11 नि: शुल्क अनलाइन समय व्यवस्थापन पाठ्यक्रमहरू
मेरा अन्य लेखहरू हेर्नुहोस्
Thaddaeus व्यावसायिक सामग्री निर्माणको क्षेत्रमा5वर्ष भन्दा बढी अनुभवको साथ SAN मा एक प्रमुख सामग्री निर्माता हो। उनले विगतमा र हालसालै पनि ब्लकचेन परियोजनाहरूका लागि धेरै उपयोगी लेखहरू लेखेका छन् तर 2020 पछि, उनी विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि गाइडहरू सिर्जना गर्न थप सक्रिय छन्।
जब उसले लेख्दैन, उसले या त एनिमे हेरिरहेको हुन्छ, स्वादिष्ट खाना बनाउँछ, वा निश्चित रूपमा पौडी खेलिरहेको हुन्छ।
8 क्यानाडामा सर्वश्रेष्ठ संगीत विद्यालयहरू
सिंगापुरमा 11 सर्वश्रेष्ठ संगीत विद्यालयहरू
शीर्ष 12 नि: शुल्क अनलाइन एमबीए पाठ्यक्रमहरू प्रमाणपत्रको साथ
नर्वे मा एमबीए कसरी प्राप्त गर्ने
एक कौशल अनलाइन सिक्नुहोस् निःशुल्क अनलाइन पाठ्यक्रम अनलाइन पाठ्यक्रमहरू विदेश निर्देशन अध्ययन गर्नुहोस् अनलाइन अध्ययन
अघिल्लो पोस्ट:मिसौरीमा6पाक विद्यालयहरू | शुल्क र विवरणहरू
अर्को पोस्ट:ओन्टारियोमा 14 सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक कलेजहरू